Ithebhulethi yeGalaxy Tab sele inexabiso lezwi kunye nedatha yezicwangciso e-UK | I-Androidsis
Inkampani yase-UK iThathu ikhuphe ingxelo yazisa izinto ezimbini, okokuqala ukuba iyakuthengisa Ithebhulethi ye Samsung Galaxy Tab kwaye okwesibini izicwangciso zakho zamaxabiso esi sixhobo.
Nangona bengenakudluliselwa kwelinye ilizwe, sinokufumana umbono olinganisiweyo wokuba ziyaphi izithonga. Iindlela ezimbini ziya kuthengiswa, enye ibandakanya idatha kunye nelizwi kunye nenye idatha kuphela.
* Iphakheji yelizwi nedatha:
Iipawundi ezili-10 ngenyanga kubandakanya imizuzu eli-100 yeminxeba, imizuzu engama-3000 yeminxeba phakathi kwenkampani enye, i-3000 yeSMS kunye ne-1 Gb yokukhuphela idatha.
Iipawundi ezili-15 ngenyanga kubandakanya imizuzu eli-300 yeminxeba, imizuzu engama-3000 yeminxeba phakathi kwenkampani enye, i-3000 yeSMS kunye ne-1 Gb yokukhuphela idatha.
* Iphakheji yedatha kuphela:
7,5 yeepawundi yokukhuphela i-1GB yedatha
Ukukhuphela i-15 yeepawundi ze-5 Gb yedatha
Kwisitetimenti esipheleleyo akukho nto ikhankanyiweyo ngexabiso esiya kuba nalo isixhobo kwaye ngokuqinisekileyo eli xabiso liya kwahluka ngokuxhomekeke kwisicwangciso esikhethiweyo. Siyathemba ukuba iVodafone, enye inkampani ukuza kuthi ga ngoku ikuqinisekisile ukuthengisa kwayo bonisa izicwangciso zakho zamaxabiso.
Oku kuthetha ukuba, njengoko besikrokrela, iVodafone ayinayo i Ukuthengiswa kweGalaxy Tab kwaye siza kuyibona kunye neenkampani ezininzi phantse kwilizwe ngalinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Ithebhulethi yeGlobal Tab sele inexabiso ngezicwangciso zelizwi kunye nedatha e-UK
Ndonwabe kakhulu malunga nale Android kunye neepilisi, umbuzo ondenza ndiziphose emva kukuba iinkampani azikuvumeli ukusebenzisa i-VOIP (skype, msg, njl.) Ukubiza. Kuba bendinombono wokuthenga iselfowuni nge-Android kwaye ndiyisebenzise ngenqanaba ledatha kwaye kukho ukufumana unxibelelwano kwezi nkqubo kodwa banqatshelwe ekucimeni inombolo. SALU2
Xa ndibona naliphi na i-UK ilizwi kunye needatha zedatha ngokuthelekiswa nezethu ndalila iinyembezi ...
Phendula kwi Muldet2701
Umama ngaphezulu kwe- € 12 ngenyanga nge-1gb yezithuthi, i-100min kuye nawuphi na umqhubi, i-3000min kwinkampani enye kunye ne-3000sms! Okumangalisayo, ndifuna oko!
Kwisivumelwano esipheleleyo noAlberto… ngendlela, umnxeba welizwi, (ngaphandle komnxeba wevidiyo), uya kwenziwa ngee-headphone okanye nge-hands-free, akunjalo? Kuya kuba nzima kakhulu ukubeka ithebhulethi ye-7-intshi endlebeni yakho ... ndinokuthandabuza okoko zavela kwintengiso